Hadal hayn ka dhalatay atoore caan ah oo toogtay sawir qaadihii filimka uu duubayay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Hadal hayn ka dhalatay atoore caan ah oo toogtay sawir qaadihii filimka...
Alec Baldwin: Jilaa caan ah oo toogtay sawir qaadihii filimka uu duubayay Ka dib markii uu si kama’ ah laba qof u toogtay qori loogu talo galay in lagu sawiro filim cusub oo uu metelay oo la duubayey, ayaa dembi baarayaal su’aalo weydiiyeen jilaaga ka tirsan Hollywood ee Alec Baldwin.
Halyna Hutchns oo sawir qaade filim ahaa ayaa goobta ku dhintay halka soo saaraha filimka Joel Souza isna uu dhaawacmay.
Booliska gobolka New Mexico oo ah gobolka filimka lagu duubayey ayaa sheegay in aan dacwad rasmi ah lagu soo oogin ninkaas, qoriguna ahaa mid noogu talo galay in filimka lagu metelo oo ay ka dhacdo rasaas dheemish ahi, hase yeeshee ilaa haatan ma cadda sida ay rasaastaa dheemishka ahi qof qudha uga jartay.
Jilaaga Alec Baldwin ayaa muujiyey sida uu uga naxay iyo murugadiisa ka dib toogashada Halyna Hutchins.
Wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inuu la xiriiray saygeeda oo uu taageero u muujiyay. “Waxaad tacsi u dirayaa ninkeeda, wiilkooda, iyo dhammaan intii taqaanay oo jeclaa Halyna,” ayuu qoray. Ms Hutchins, oo 42 jir ah, ayaa lagu toogtay goob ku taal galbeedka Rust iyadoo ka shaqaynaysay agaasinka filimka.
“Ma jiraan erayo u qalmo oo aan ku soo gudbiyo dareenkayga iyo murugada ku saabsan shilkii naxdinta lahaa ee ay naftooda ku waaysay Halyna Hutchins, oo ahayd xaas, hooyo iyo saaxiibteen oo aan aad u qaddarino,” ayuu ku soo qoray bartiisa Twitter -ka.
“Waxaan si buuxda ula shaqeynayaa baaritaanka booliiska si wax looga oogaado sida masiibadan u dhacday.”
Ms Hutchins ayaa isbitaal loogu qaaday diyaarad helicopter ah ka dib toogashadii galabnimadii Khamiista laakiin waxay u dhimatay dhaawicii soo gaaray. Agaasime Joel Souza, oo 48 jir ah, oo sidoo kale dhaawacmay ayaa goobta ambalaasta looga qaaday
Previous articleXogo Dheeraada Oo Laga Helayo Sababta Ay Diyaaarada Fly Dubai Ujoojisay Duulimaadyadii Ay Ku Iman Jirtay Hargaysa+ Doorka Baashe Morgan & Ex-wasiir Maxamuud Xaashi!
Next articleQaramada Midoobay oo hakisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay gobolka Tigray